Ra’iisul Wasaare Khayre oo qaabbilay Ergayga gaarka ee QM u qaabbilsan Carruurta iyo xasaradaha Hubeysan+Sawirro | BRA
Ra’iisul Wasaare Khayre oo qaabbilay Ergayga gaarka ee QM u qaabbilsan Carruurta iyo xasaradaha Hubeysan+Sawirro
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya mudane; Xasan Cali Kheyre, ayaa Maanta Xafiiskiisa ku qaabbilay Ergayga gaarka ah ee xogyahaya guud ee Qaramada midoobay, u qaabishan Carruurta iyo khilaafaadka Hubeysan, Virginia Gamba de Potgieter.
Kulanka dhex maray Ra’iisul Wasaaraha Dalka iyo Ergayga ayaa looga hadlay sidii kooxaha Argagaxisada looga hor istaagi lahaa Askareynta Carruurta, si loo badbaadiyo mustaqbalkooda.
Virginia Gamba, oo Ra’iisul Wasaaraha uga mahad celisay soo dhoweynta loo sameeyay ayaa bogaadisay dedaallada Dowladda ee ku aaddan dib-u-habeynta Ciidanka oo qeyb ka qaadatay sare u qaadidda ilaalinta xaquuqda Carruuta.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, ayaa Virginia Gamba u caddeeyay in Dowladdu ay ka go’antahay in Soomaaliya ay noqoto Dal nabad ah, guulo wax ku ool ahna laga gaaray tallaabooyinka loo qaaday xasilinta Dalka, arrinaas oo horseedeysa in Carruunta iyo dhammaan Bulshadu ay helaan nabad waarta.